अवकाशप्राप्त सेनालाई उल्का पिण्ड बेच्ने नाममा १ करोडको ठगी « News of Nepal
अवकाशप्राप्त सेनालाई उल्का पिण्ड बेच्ने नाममा १ करोडको ठगी
एजेन्सी । वैज्ञानिकहरू समय–समयमा कसरी विशेष र खतरनाक उल्का पिण्डहरू हुन्छन् भनेर जानकारी पठाउन जारी राख्छन्। तर के तपाईंले कहिल्यै उल्का पिण्डको नाममा कसैलाई धोका दिएको सुन्नुभएको छ ?
अब तपाई सायद सोच्दै हुनुहुन्छ, कसैले उल्का पिण्डको नाममा कसरी धोका दिन सक्छ ? त्यसोभए हामी तपाईंलाई यो धेरै कुरा भन्दछौं उल्कापिंडहरूले विनाश मात्र सिर्जना गर्दैन तर अत्यन्त मूल्यवान पनि हुन्छ। उल्का पिण्डको नाममा करोडौं ठगिएको छ।
तपाईंले धोकाका थुप्रै कथाहरू सुन्नुभएको हुनुपर्छ। तर देहरादूनमा एउटा ‘स्तब्ध’ पार्ने घटना प्रकाशमा आएको छ। अवकाशप्राप्त सेनालाई उल्का पिण्ड बेच्ने नाममा १ करोडको ठगी गरिएको छ। सिंह बिष्टलाई यस जालसाजीको ‘मुद्दामा पीडितको विरुद्धमा नामित गरिएको छ।
जुन २०१७ मा युनिभर्सल माइन्स एण्ड मिलर टर्नर कर्पोरेशन इण्डिया कम्पनीका एक व्यक्तिले भनेका थिए कि जम्मू र हिमाचलमा काम गर्ने बिष्टको ग्राहकको नाममा एक उल्का पिण्ड छ जुन बजारमा ५००० करोडको मूल्य हो।
यसको साथमा यो पनि भनियो कि उसको वैज्ञानिक परीक्षणमा करीव १० लाख रूपैयाँ लाग्ने छ। लोभमा पीडितले कम्पनीलाई बिभिन्न तरीकाले करिब डेढ करोड रूपैयाँ दिए। पछि थाहा भयो कि यो ठगी हो जुन तहरीर बिस्टले पुलिसलाई दिएको निवेदमा भनिएको छ ।